I-Huawei Watch 3 kunye neFreeBuds 4, ukubheja kwisiphelo esiphakamileyo kwizinto ezinxitywayo | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | 02/06/2021 19:25 | ngokubanzi, Izaziso
Inkampani yaseAsia yenze intetho yamazwe aphesheya apho isivumele khona ukuba sijonge iindaba eziza kufika kwikota elandelayo. Kungekudala siza kuba nethuba lokukuzisa uhlalutyo olunzulu lwazo zonke ezi zixhobo, okwangoku siza kukuxelela ukuba zithini iindaba zazo.
IHuawei iguqula imarike ijonge ezantsi ngeHuawei Watch 3 kunye neWatch 3 Pro ehamba nesona sandi silungileyo kunye neefowuni zayo ze-TWS FreeBuds 4. Makhe sibone ukuba luluphi na uphuculo oluthenjiswa nguHuawei ngezixhobo zalo ezitsha kwaye ukuba kufanelekile ukubheja kuzo zonke ezi ndaba.
1 I-Huawei Bukela i-3 kunye ne-3 Pro
I-Huawei Bukela i-3 kunye ne-3 Pro
Siqala ngewotshi entsha evela kwinkampani yaseAsia, yamkela uyilo setyhula ngolwakhiwo olusulunge ngakumbi. Iya kuqhubeka ikhatshwa liqhosha loomatshini, nangona ngeli xesha bebandakanye isetyhula "isithsaba" esiya kuthi sivumele ukusebenzisana IHarmonyOS 2 njengeNkqubo yokuSebenza. Zombini ziya kunyuka iphaneli I-1,43 ″ I-AMOLED ene-1000 nits, ngelixa uguqulelo lwe "Pro" luya kuba nekristale yesafire.
I-Hi6262 iya kuba ngumqhubekekisi okhathalela umsebenzi kunye ne-2 GB ye-RAM kunye ne-16 GB yokugcina. Siza kuba nonxibelelwano lwe-4G nge-eSIM, ukubek'esweni kwentliziyo, inzwa yeoksijini yegazi, iWiFi, iBluetooth 5.2 kwaye kunjalo I-NFC. Oku kuyasivumela ukuba siqwalasele iiparameter ezininzi, kwaye silandele uqeqesho lwethu ngeGPS, eya kuthi ibe ngumjelo omabini kwimeko yenguqulo yePro.
Isizukulwana sesine seefowuni ezithandwa kakhulu yibhrendi sifika ngombala onomdla kunye necala lokutshaja elibonakalayo. I-Huawei ngoku ibenze baba nobumbano ngakumbi, ukukhanya kwaye ithiyori inamandla ngakumbi. Baza kubonelela ngoqhagamshelo lweBluetooth 5.2 kunye nebhetri ye-30 mAh kwitybbuds nganye ene-410 mAh kwimeko yokutshaja.
Ngale ndlela siya kuba nayo Iiyure ezingama-4 zokuzimela kwii-headphone kunye neeyure ezingama-20 ngaphezulu kwimeko. Singazidibanisa nezixhobo ezibini ngaxeshanye enkosi kunxibelelwano olumbini olunama-90 ms kuphela e-latency. Ngoku une Ukucinywa kwengxolo esebenzayo kunamandla ngakumbi ukuya kuthi ga kwi-25 dB ngaphandle kokungabikho kwizixhobo zodwa. Ikwafumana ukusebenza kweFreeBuds 3 kunye nokunxibelelana kwayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Huawei Bukela i-3 kunye ne-FreeBuds 4, ukubheja kwisiphelo esiphakamileyo kwizinto zokunxiba